Mariela Carril | | Florencia, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
Florencia ၎င်းသည်အီတလီနိုင်ငံရှိအလှဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ နေရာတိုင်းမှာပြတိုက်များ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဟောင်းများ၊ ချစ်ဖွယ်ကောင်းသောရင်ပြင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းများ၊ မမေ့နိုင်သောလမ်းများရှိသည်။ Florence တွင်3ရက် သူတို့ကမလုံလောက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြည့်ပြီးပြန်လာချင်တယ်။
ကျွန်မဖလောရန့်ကိုပထမဆုံးသွားတဲ့ခရီးက ၅ ရက်ပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာမှမလုပ်ဘဲအများကြီးလုပ်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကပြန်စဉ်းစား၊ ငါ့လည်ပတ်မှုတွေကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးအ ၀ တ်ကျက်ထဲမှာဘာတွေကျန်နေသေးလဲဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်တော့အကြံဥာဏ်အချို့ချန်ထားနိုင်ပါတယ် ၃ ရက်အတွင်းဖလောရင့်မှာဘာကြည့်ရမလဲ သာ။
ငါတို့ပြောသလိုပဲနေရာတိုင်းမှာပြတိုက်တွေ၊ နန်းတော်တွေ၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေရှိတယ်။ တစ်ခုကသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြားလည်ပတ်မှုခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပထမအမျိုးအစားပါဝင်သည် အိမ်များနှင့်နန်းတော်ဟောင်းများဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ Medici လက်နက်တံဆိပ်တပ်ထားသောလမ်းများနှင့်ဒုတိယအမျိုးအစားတွင်ပြတိုက်များကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဘာသာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ဗိသုကာနှင့်ဘာသာရေး၊ အသင်းတော်များ သူတို့အဓိကဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် ၇၂ နာရီလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်အကြံပေးပါသည် the Dome, Bell Tower, Crypt, Baptistery နှင့်ပြတိုက်တို့ကိုကြည့်ပါ.
ယနေ့လက်မှတ်သည်ယူရို ၁၈ ဒေါ်လာကုန်ကျပြီးသင် ၇၂ နာရီ ဆက်၍ သွားလိုလျှင်၎င်းတို့သည်အတော်အတန်ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုများ ဖြစ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာအတွင်းဖြန့်ဝေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအတွက်၊ Duomo ထိပ်ကိုတက်ပါသင်အပိုပေးရမယ်။ များစွာသော။
ကျဉ်းမြောင်းသောလှေကားတက်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအထက်မှမြင်ကွင်းများလှပသည်။ ချာ့ချ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်အတွက်ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမိုးခုံးတက်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆင့် ၄၆၃ ခု ...
ငါခရီးသွားကဒ်များမဝယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားကဒ်၊ Firenze ကဒ်ရှိတယ်၎င်းသည် ၇၅ ယူရိုနှင့်အပို ၇ ယူရိုပါသောကြောင့်အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်စီစဉ်နေစဉ်အချိန်ဇယားကိုသင်မှတ်မိရမည်။
အမိုးခုံးဝင်ပေါက်သည်နံနက် ၈ နာရီမှဖြစ်သည်။ သို့သော်တနင်္ဂနွေနေ့များပိတ်သည်။
Bell Tower သို့ဝင်ပေါက်သည်နံနက် ၈:၃၀ နာရီမှဖြစ်သည်။ ဒါဟာဓာတ်လှေကားမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ခြေလှမ်းများ 8 အထိထည့်ပါ။
အဆိုပါ crypt မှဝင်ပေါက်နံနက် 10 နာရီမှာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဘာသာရေးဖြစ်ရပ်များ၏တနင်္ဂနွေနှင့်နေ့ရက်ကာလ၌ပိတ်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရှေ့တွင်ရှိပြီးနံနက် ၁၁း၁၅ နာရီတွင်ဖွင့်လှစ်သည်။
အခုပြောကြစို့ Florence ရှိပြတိုက်။ ပွင့်လင်းတဲ့ပြတိုက်တွေရှိတယ်၊ မြို့တော်ကလေပြတိုက်တစ်ခု။ ငါတို့ကငြင်းလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ရိုးရာပြတိုက်တွေလည်းရှိတယ်။ တချို့ကိုလည်ပတ်သင့်တယ်။
သင်အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည် Accademia ပြခန်း၊ Uffizzi ပြခန်း၊ Palazzo Strozzi၊ Palazzo Vecchio ပြတိုက်၊ Palazzo Pitti ယင်းနှင့်အတူ Vasari စင်္ကြံအဆိုပါ Palazzo Davanzati၊ Medici Chapels၊ Bargello ပြတိုက်သို့မဟုတ်အော်ပရာ del Duomo ပြတိုက်.
ဒါတွေဟာဖလောရင့်စ်ပြတိုက်တွေထဲကတချို့ပါ။ များစွာသောအရာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဘာကိုကြိုက်တယ်၊ ဘာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးရက်အတွင်းဆုံးရှုံးရမယ့်အချိန်မရှိဘူး။ ဥပမာ - အလယ်ခေတ်နှင့်အိမ်ငယ်လေးများထက်အိမ်ငယ်များကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အလယ်ခေတ်အိမ်လေး Palazzo Davanzati သို့သွားရောက်ပါ ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံ။ အဆိုပါလက်မှတ်သည်အလွန်စျေးပေါပြီးလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ၏နေထိုင်ခဲ့ပုံ - အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ထမင်းစားခန်းများ -
ငါလည်းလာလည်ပတ်ခဲ့တယ် Palazzo Vecchio ၎င်း၏မြင့်မားသောခေါင်းလောင်းတာဝါတိုင်နှင့်အတူအလယ်ခေတ်နှင့် Renaissance နှင့်လှပသောအကြား၎င်း၏စတိုင်နှင့်အတူ Salone dei Cinquecento
အနုပညာဖလောရင့်စ်ကိုမြင်ရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရှင်းပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည် Uffizzi ပြခန်းသို့မဟုတ် Accademia ပြခန်းသို့အလည်အပတ်သွားသင့်သည်။ ဒါဝိဒ်၊။ Giotto၊ da Vinci၊ Michelangelo, Perugino, Giambologna တို့၏လက်ရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ရာသီဥတုကောင်းမယ်ဆိုရင်အကြံပေးလိုပါတယ် ဆိုင်ကယ်ငှားပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ ၎င်းသည်အလယ်ခေတ်လမ်းများမှတဆင့်လှည့်လည်သွားလာရင်းအပြင်မြစ်၏အခြားတစ်ဖက်သို့ရောက်ရှိရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည် ပိတီနန်းတော်။ ဤနေရာတွင်သင်သည်၎င်း၏လှပသောအတွင်းပိုင်း၊ Rubens၊ Rafael သို့မဟုတ် Titian တို့၏လက်ရာတော်များဖြစ်သော Royal Apartments ကိုသိရှိနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်လှပသောဥယျာဉ်များကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
ငါအဆုံးစွန်သောအမှုကိုပြု။ ငါကနောင်တမရကြဘူး။ The Boboli ဥယျာဉ် ပန်းခြံများ၊ ပန်းပုများ၊ ပန်းများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ မြစ်နှင့်မြို့၏ရှုခင်းများ၊ လှပသောအရောင်များနှင့်အတူ ၁၅ ရာစုမှ ၁၉ ရာစုအထိဥယျာဉ်များ၌မမေ့နိုင်စရာဖြစ်သည်။
အ Medici Chapels သူတို့သည်မြို့ကြီးအတွက်များစွာလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သောဤကြော့ရှင်းသည့်မိသားစုကိုဂုဏ်တင်သောကြောင့်သူတို့လည်းကြီးကျယ်ခမ်းနားသည် Bargello ပြတိုက် ပန်းပုတွေအများကြီးနှင့်အတူ။ ထို့နောက်မြို့တော်၌နေရာတိုင်းတွင်အသင်းတော်များရှိသည် သံချပ်ကာပြတိုက် စိတ်ကူးအနည်းငယ်ထပ်မံတည်ရှိသည် Sibbert ပြတိုက်သင်အလယ်တန်းခေတ်ကိုကြိုက်လျှင်သို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်အတူသွားလျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အကြံပြုပါသည်။ ငါတကယ်ကြိုက်တဲ့နောက်ပြတိုက်တစ်ခုက Galileo ပြတိုက်, ကမ္ဘာလုံးနှင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်စပ်စုနက္ခတ္တဗေဒလေ့လာရေးတူရိယာနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ။
နောက်ဆုံးတော့သုံးရက်တာကြာမယ့်အချိန်မဟုတ်ပေမယ့်နေ့လည်နဲ့ညတွေမှာအားသာချက်ရှိရမယ်။ သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်များမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည့်အခါမင်းသည်ရေချိုးခန်းနှင့်ထပ်မံထွက်ခွာရမည်၊ သားရေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများ ၀ ယ်ရန် (သို့) မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထိုင်။ မြို့၏ပြည်သူလူထုနှင့်၎င်း၏ခရီးသွား em ည့်သည်များအကြောင်းစဉ်းစားပါ။
သင်သည်အိမ်လုပ်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုဝယ်။ ထိုင်။ မြစ်ကိုကြည့်နိုင်ပြီးလူကြိုက်များသော Ponte Vecchio ကိုကြည့်။ လှပသော Piazzale Michelangiolo ရှိစက်ဘီးဖြင့်သွားနိုင်သည်။ San Miniato ၏ဘုရားကျောင်း နှင့်၎င်း၏သင်္ချိုင်းနှင့်၎င်း၏လှပသောအမြင်များ။
ပတ်ပတ်လည်အများအပြားစားသောက်ဆိုင်ရှိပါတယ် Florence Market နှင့်အတူတူပင်စျေးကွက်အတွင်း။ ငါနှစ် ဦး စလုံး, အထူးသဖြင့်စျေးပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်တာ, ပေါင်မုန့်ကိုဝယ်ယူပြီးတော့စတုရန်းရှိစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ညစာစားရန်အကြံပြုသည်။
Florence တွင်3ရက် သူတို့ကမင်းအတွက်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တော့မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ချစ်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားတာကခရီးသွားအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » Florencia » သုံးရက်အတွင်းဖလောရင့်မှာဘာကြည့်ရမလဲ